राजेशपायल राईसँग हङकङ संवाद « Naya Page
राजेशपायल राईसँग हङकङ संवाद
प्रकाशित मिति : August 21, 2017
व्यास्त गायक राजेशपायल राई विहिबार झनैं व्यास्त थिए । म पायल विनाको राजेश राईले नयाँ पेजका लागि कुरा गरौं भनेपछि उनको उत्तर आयो, ‘टेकमा छुु, एक घन्टापछि गरौं न ।’ कुनै गीतको रेकर्डिमा रहेछन् राजेश । मैले २ घन्टापछि सम्पर्क गर्दा उनी बागबजार पुगीसकेका रहेछन् । साथीभाइसँग साँझको जमघटमा थिए, उनी । अन्तरवार्ता गर्ने मुड र वाताबरणमा थिएनन् उनी । तर, हङकङको बारे भनेपछि उनी निकैं उत्साहित भए । तर, यो उतारीरहेको बेला बेला उनी हङकङ पुगीसकेका छन् ।
खोटाङ समाज, हङकङको आयोजनामा भूकम्प पीडितहरुको सहयोगमा हुन लागेको कार्यक्रममा गीत गाउन राजेश हङकङ पुगेका हुन् । राजेश संसारका धेरैं मुलुकहरुमा गीत सुनाउन पुगेका छन्, तर सबैभन्दा बढी पुगेको प्रिय उनको शहर हो हङकङ । हङकङसँग उनको अनेक सम्बन्ध र साइनो जोडिएको रहेछ । के रहेछ त उनको हङकङसँगको त्यस्तो साइनो ? राजेशपायल राईसँगको हङकङ संवाद :
हङकङबाट संगीतको सुखद यात्रा
राजेशको २१ औं हङकङ भ्रमण हा योे । सन् १९९७ देखी यता निरन्तर हङकङ गइरहेका छन् उनी । राजेश सन् १९९७ मा पहिलोपटक हङकङ पुगेका हुन् । राजेश उतिबेलाका चर्चित र व्यास्त गायक सम्भु राईको साथमा गीत गाउन पहिलो पटक हङकङ पुगेका थिए । त्यो समुहको उनी सबैभन्दा फुच्चे गायक थिए । राजेशले सुनाए, ‘हाम्रो टोलीको सबैभन्दा फुच्चे गायक थिए ।’
उतिबेला ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरुको मुख्यालय हङकङमा थियो । ब्रिटिस क्याम्पहरुमा धेरै नेपाली गायकगायिका गीत सुनाउन पुग्थे । उनी पनि त्यही मेलोमा पहिलोपटक हङकङ पुगेका थिए । राजेशको यो पहिलो विदेश भ्रमण थियो । उनी पहिलोपटक हङकङ पुग्दा अचम्भीत भएका थिए । ‘त्यति राम्रो शहर, त्यति ठुलो घर देख्दा त म चकित नै भए’ उनले सुनाए । पहिलो पटक विदेशमा गीत गाउन पाउदा उनी निकै खुसी भएका रहेछन् । भन्छन्, ‘मेरो संगीतको सुखद यात्रा हङकङबाटै सुुरु भयो ।’
पहिलो ठुलो कमाई हङकङमा
नेपालीको बसोबास रहेको अधिकांस देश पुगेर गीत गाइसकेका छन् राजेशले । गीत गाएर राम्रो कमाउने मध्येमा पर्छन् उनी । उनले एक पटक लेखेका थिए, ‘मेरो जीवन आधा आकाशमा बित्ने भयो ।’ यसको मतलब विदेश भ्रमणको लागि आकाशमा उडीरहनुपर्छ । अहिले गाएर धेरै कमाउछन् । तर, उनले गीत गाएर सबैभन्दा पहिलो पटक धेरै पैसा हङकङमा नै पाएका रहेछन् । ‘मैले पहिलो पटक हङकङमा गीत गाउँदा ४० हजार पाएको थिएँ, जुन मेरो जीवनको पहिलो धेरै कमाइ थियो’ उनले सुनाए, ‘त्यो बेला यतिधेरै खुसी भएको थिए, जुन म अहिले शब्दमा भन्न सक्दिन ।’
पहिलो पटक हङकङबाट फर्किदा राजेशको पकेटमा ‘क्यास’ ४० हजार मात्रै होइन एक टेल सुन पनि थियो । नेपाल फर्किएपछि उनलाई बढो ‘कन्फुुज’ भयो, ‘यत्रो धेरै पैसा के गर्ने ?’ गीत गाएर पनि पैसा कमाइन्छ भन्ने विश्वास त्यही कार्यक्रमले दिलाएको थियो । उनले भने, ‘गायनमा लागेर पनि जीवन चलाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास बढाएको थियो ।’
अक्षम्य गल्तीमा पनि हङकङबासीको असिम माया
२१औं पटकसम्म हङकङ पुग्दाका अनेक सम्झनासँग छन् राजेशसँग । धेरै नयाँ ठाउँ घुमेका छन्, धेरै मिठा खाना खाएका छन् । कैयौं आफन्ता र प्रियजनहरुसँग मिठा–रमाइला पलहरु बिताएका छन् । तर, हङकङका ती सबै सम्झनाहरुलाई माथ गर्ने एउटा घटना छ । जुन घटना सम्झीदा सधैं उसलाई नमिठो लाग्छ । उनी त्यो दिनलाई कालो दिन भन्छन् । भुुल्न चहान्छन् ।
कालो दिन अर्थात् जुन दिन राजेशले रक्सीले मातेर गीत गाउनै सकेनन् । हङकङमा मान्छेहरु धेरै व्यास्त हुन्छन् । त्यही व्यास्त समयको बीचमा राजेशको गीत सुन्न हङकङवासी नेपालीहरु भेला भएका थिए । उनी गीत गाउनकै लागि नेपालबाट हङकङ पुगेका थिए । दर्शकहरु कतिबेला राजेशपायल स्टेजमा आउला ? भनेर व्याग्र प्रतिक्षामा थिए । तर, राजेश रक्सी पिएर बेहोसी अवस्थामा थिए । रक्सीले मातेर स्टेजमा आउनै सकेनन् । राजेशकै गीत सुन्न भेला भएका दर्शकस्रोता निराश भएर फर्किए । जुन एउटा गायकको लागि अक्षम्य गल्ती नै थियो । उनले सुनाए, ‘म बाट त्यति ठुलो गल्ती हुँदा पनि दर्शकहरुले माया गरेर माफी दिनुुभयो ।’
आफन्तै आफन्ता बस्ने देश हङकङ
कुनैबेला हङकङमा राजेशको सबैभन्दा बढी आफन्ता र प्रियजनहरु थिए । तर, अहिले बेलायत सरेका छन् । ‘हङकङ कुनै बेला सबैभन्दा बढी आफन्ताहरु भएको देश हो । अहिले बेलायत सर्नु भएको छ’ उनले सुनाए । ब्रिटिस गोर्खाहरुको कारण हङकङमा नेपालीहरुको आजको बसोबास सम्भव भएको हो । ब्रिटिस गोर्खा परिवारकै सदस्य हुन् राजेश ।
हङकङका यी चिज प्रिय छ राजेशलाई
राजेशलाई हङकङको सबैभन्दा मनपर्ने नेपालीहरुको माया र सद्भाव रहेछ । ‘हङकङबासी नेपालीहरुको माया सबैभन्दा मलाई प्रिय लाग्छ’ राजेशले सुनाए । त्यसबाहेक उनलाई हङकङको शहर, खाना र यातायत मनपर्छ ।
हङकङको सि फुड उनलाई असाध्यै मनपर्छ । ‘सि फुड मलाई अति मनपर्छ, हङकङ पुगेपछि यतिधेरै खान्छु की अब चहि ६ महिनालाई पुग्छ है भन्ने जस्तो हुन्छ’ उनले सुनाए,‘यसपाली पनि टन्न खाएर आउने हो ।’ यस्तै हङकङको यतायत व्याबस्था असाध्यै राम्रो लाग्छ । एमटीआरमा सररर रमाइलो लाग्दो रहेछ उनलाई ।
राजेशलाई यतिधेरै हङकङको माया लाग्छ । बाहिर माया गर्ने त उनका थुप्रै होलान् ? तर खासमा माया गर्ने अर्थात् जीवन संगीनी मान्छे उसले पाएका छैनन् । ‘हङकङको कसैले प्रस्ताव राख्यो भने के गर्नुहुन्छ ?’ ‘रहर र चाहना हुदा हुँदै पनि आजसम्म जुरेको छैन’ उनले सुनाए, ‘अब कोही पाए भने सोच्नुपर्ला ।’ राजेशपायल यतिबेला हङकङमा नै छन् । हङकङका युवतीहरुले राजेशलाई सोच्न बाध्य पार्ने की ? लौ है, यो अवसर आजकै कार्यक्रममा छोप्ने हो की ?
एमाले ओली समूहको बैठकमा सहभागी हुन वामदेव गौतम बालुवाटारमा
बेलायतद्वारा हङकङका बेलायती नागरिकलाई भिसा दिने घोषणा
तिहारको बेला दुःखमा हङकङका नेपाली : आगलागीबाट ७ जनाको मृत्यु, ११ घाइते
सङ्क्रमित यौनकर्मीकाे कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा कठिनाइ
डा. प्रेमको नमेटिने पदचाप
छातीमा तक्मा । कोट पाइन्ट, टिलिक्क टल्केको जुत्ता अनि खाइलाग्दो ज्यान । सार्वजनिक कार्यक्रम र
हेली एभरेष्टका तीन जना निर्देशकद्धारा सगरमाथा आरोहण
काठमाडौं, १ जेठ । हेली एभरेष्ट प्रा.लिका तीन जना डाइरेक्टरहरुले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल
काठमाडौं एनएसएल बन्यो च्याम्पियन : हात पार्‍यो ३५ लाख, धनगढी सिटी १–० गोलले स्तब्ध
काठमाडौं, १ जेठ । पहिलो संस्करणको नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) को उपाधि काठमाडौं रेजर्सले जितेको
विकास–निर्माण तीब्र रहेको प्रमको दावी, १० महिनाको विकास खर्च भने ३५ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं, १ जेठ । सरकारले कोरोना महामारीका बीचमा पनि विकास निर्माणको कामले तीव्र गति लिइरहेको
माधवजीहरुसँग हाम्रो भेट फेरि ७६ (५) मा हुन्छ : प्रचण्ड
प्यालेस्टाइन र इजरेलको आकाशभर रकेट बमको वर्षा, ७४ को मृत्यु (भिडियो)
बालुवाटारमा एमाले स्थायी कमिटी बैठक, नेपाल–खनाल पक्षलाई फकाउने प्रयासमा ओली
अक्सिजनको तोकियो कोटा, सबैभन्दा धेरै वीर अस्पताललाई (सूचीसहित)
२०७८ बैसाख २८ गते मंगलबारको तपाईको राशिफल
२०७८ बैसाख २७ गते सोमबारको तपाईको राशिफल
पार्टी एकताको अपिलसहित मध्यरात ओलीलाई नेपालको चिठी : एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव
२०७८ बैसाख २६ गते आइतबारको तपाईको राशिफल